Tafatiraha sawirka iPadka ee awooda leh ee Pixelmator Sawirku wuxuu ku boodaa iPhone | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Tafatiraha sawirka iPadka ee awooda leh ee Pixelmator Photo wuxuu ku boodaa iPhone
Tafatiraha sawirka iPadka ee awooda leh ee Pixelmator Photo wuxuu ku boodaa iPhone
Haddii aad suuqa ugu jirto tifaftiraha sawirka iPhone si buuxda u sifaysan, ha ka fogaanin sawirka Pixelmator kaas oo keenaya hagaajin qani ah iyo astaamaha AI ee calaacasha gacantaada.
Marka lagu daro iPadka, Sawirka Pixelmator hadda waa laga heli karaa iPhone, sidoo kale
Cusboonaysiinta waxaa lagu bixiyaa lacag la'aan isticmaalayaasha jira
Sawirka Pixelmator hadda lagama heli karo Mac-yada
Sawirka Pixelmator wuxuu keenaa tifaftiraheeda sawirka iPadka iPhone
Markii hore app-ka iPhone-kaliya, Pixelmator Photo hadda wuxuu ku fidiyay talefanka gacanta ee Apple sidoo kale. Tani waxay kuu ogolaanaysaa inaad sawir kula qaadato iPhone kaaga ka dibna aad u tafatirto sida aad jeceshahay adiga oo isticmaalaya astaamaha awooda leh ee Sawirka Pixelmator. Appku waxa uu la midoobaa maktabadaada Sawirada, isaga oo kuu ogolaanaya in aad si fudud sawir kasta uga soo dejiso abka Sawirada.
Markaad wax ka beddesho sawirada, waxay si toos ah u beddeshaa la shaqaynta abka Sawirada, wax ka beddelkaaga waxa si aan burbursanayn u xafiday Sawirka Pixelmator, wax walbana way shaqeeyaan. Iyo gaar ahaan iPhone, waxaan ku daray cusub, tifaftire-style filmstrip ka dhigaya furitaanka sawirada tafatirka ka fudud oo ka sahlan abid.
Barowsar ku jira abka wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ka soo dejiso sawirada ilaha sida ulaha USB adigoo isticmaalaya abka Files.
"Laga soo bilaabo maalintii ugu horeysay ee aan ku sii deynay Pixelmator Photo ee iPad-ka, waxaan ku riyoonay inaan helno tifaftirahan iPhones-ka, aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku dhawaaqno inay ugu dambeyntii halkan timid," ayaa lagu yiri ogeysiis ku yaal bogga Pixelmator Photo.
App-ka, oo ay qoreen walaalaha Lithuania Saulius iyo Aidas Dailide, waxay keenaysaa in ka badan 30 hagaajin midab-heer desktop ah oo markii hore loogu talagalay Pixelmator Pro. Waxa kale oo aad helaysaa farabadan oo horudhac ah oo ay dhiiri galisay sawir qaade filim, awooda dufcada wax ka beddelka sawirada sawirada oo dhan, qalab sirdoon macmal ah oo caqli badan oo ay ku jiraan barashada mashiinka ku shaqeeya Dalagga, Denoise iyo astaamaha Xallinta Sare, iyo wax badan, oo aad u badan.
Xuquuqda sawirka: Pixelmator
Sawirka Pixelmator lagama heli karo goobta macOS.
Tafatirka sawirada iPhone RAW ee leh Sawirka Pixelmator
Waxa ugu wanagsan, abka waxa uu asal ahaan ka taageeraa sawirada RAW ee in ka badan 600 oo kamaradood, iyo sidoo kale qaabka Apple ProRAW, oo waxa uu kuu ogolaanayaa inaad si sahal ah u saxdo. Ugu dambeyntiina, yeynan iloobin qaabka dayactirka ee caanka ah ee app-ka kaas oo horumariyayaashu ay yiraahdeen waa aaladda ka saarista shayga kaliya ee si buuxda u dhammaystiran oo si aan burbursanayn ula shaqeeya tallaallada RAW.
Ha ku khaldin Sawirka Pixelmator (loogu talagalay hagaajinta sawirka dadaalla'aanta) Pixelmator iyo Pixelmator Pro, kuwaas oo ah tifaftirayaasha garaafyada awoodda leh ee goobta Mac.
Haddii aad horay u soo iibsatay abka iPad-ka daabacaadda, waxaad heli doontaa nooca cusub ee iPhone bilaasha ah oo qayb ka ah Sawirka Pixelmator ee soo dejinta iOS.
Ka soo deji Sawirka Pixelmator ee iOS Store Store qiimo dhan $3.99.
Shaashada Apple Watch aad ma u yar tahay? Waa kan sida loo iftiimiyo
Podcast-ka asalka ah ee Apple ee cusub 'Wild Things: Siegfried & Roy' wuxuu bilaabmi doonaa Janaayo 12, 2022